GERISS - Isboortiga Xirfadaha & Fiilooyinka
Nidaamka khaanadda sanduuqa khafiifka ah ee gidaarka laba-geesoodka ah ayaa loo adeegsadaa jikooyinka & musqusha. Noocan ah khaanadda khafiifka ah ee khaanadda khafiifka ah waxay isticmaashaa slide khaanad hoose oo khafiif ah oo leh qalab quful leh. Sidoo kale waad beddeli kartaa inaad adeegsato riixitaanka si aad u furto isbaaro qarsoon oo khaanadda hore leh. Muuqaalka sheygan ayaa ah jihada hoose ee khaanadda labaduba u isticmaali karaan khaanadda birta iyo khaanadda alwaax. Kuu keydin karaa qiimaha alaabada adiga.
KU SOO DHAWOW GERISS HARDWARE
Shanghai Yangli Furniture Waxyaabaha Co., Ltd.
Wax soo saarka qalabka guryaha ee mihnadlaha ah tan iyo 1999.
Ahama square steel usheeda dhexe ahama BBQ foornada / ...
Sharaxaad: Magaca Magaca: S ...
Sharaxaad: Magaca Magaca: ...
Fariidh-on faseexad golaha wasiirada qarsoon
86mm dhinaca khaanadda Dhererka galaas sanduuqa biraha slide d ...
150mm dhalada dhererka slide jikada siibid caato ah ...
Description: Nooca: 150mm ayuu ...
Faahfaahin: Nooca: 118mm aniga ...
Nidaamka dhaqdhaqaaqa dhow ee jilicsan ee aamusnaanta laba wa ...
Description: Nooca: Aamusnaanta s ...
Tilmaanta: Nooca: Double w ...
Faahfaahin: Nooca: 48mm tel ...
45mm kordhin dheeraad ah jilitaanka kubad xiridda jilicsan d ...
Faahfaahin: Nooca: 45mm ful ...
45mm kanaal telescopic kordhin dheeraad ah hydraul ...
Faahfaahin: Nooca: 45mm buuxa ...
W45 dheeraad ah oo dheeraad ah oo jilicsan xirxirashada kubad dr ...
Faahfaahin: Nooca: w45 buuxa ...
Faahfaahin: Nooca: 45mm Buuxi ...
45mm khaanadda steel ahama dheeraad ah slid ...
Extension Full channel telescopic 45mm bea kubad ...
Faahfaahin: Nooca: Dheeraad Dheeraad ah ...
37mm Channel / telescopic kordhin dheeraad ah oo saddex gees ah b ...
Faahfaahin: Nooca: 37mm Ful ...
17mm Single kordhin dhinac Buur telescopic dra ...
Tilmaanta: Nooca: 17mm Dembiga ...
Shirkadeena SHANGHAI YANGLI Furniture MATERIAL CO., LTD oo lagu aasaasay 1999, waxay diirada saareysaa qalabka iyo qalabka wax soo saarka qalabka guryaha. Waxaan hadda ka shaqeynaa laba xarumo R&D ah iyo xarumo farshaxan farshaxan oo ku yaal Shanghai iyo Zhongshan, gobolka Guangdong. Alaabtayada waxaa lagu iibiyaa laba magac oo sumcad leh oo aad u caan ah: YANGLI iyo Geriss. Iyagu waa nidaam khaanad, bogagga qarsoon, isbarbar dhigyada Ball, Fariin qarsoon, gacmeedyo, fallaadhihii foornada iyo qalabka kale ee qalabka guryaha, kuwaas oo loo isticmaalo qalabka guryaha, armaajooyinka, qalabka guryaha iyo mobilka. Wax soo saarkayagu waxay sumcad ku dhex heleen in ka badan 40 dal oo adduunka ah.
Nofeembar / 17/2020
Oktoobar / 16/2020
Sebt / 14/2020
Sebt / 09/2020